Banyere Anyị - Shenzhen Walkers Industrial Co., Ltd.
Na afọ 10 na-emepe emepe, anyị arụ ọrụ ahịa si ihe karịrị otu narị mba ụwa, dị ka US, UK, Australia, German, Russia, Brazil, India, Spain na wdg. Anyị na-enye ikpe dị elu, ma na-enyekwara ha aka inweta mmeri ahụ ma rụchaa ọrụ ahụ. N'otu oge ahụ, anyị na-enweta nzaghachi dị mma ha ma bụrụ ezigbo ndị mmekọ nwere ntụkwasị obi ogologo oge.
Anyị factory ekpuchi ebe ndị 5000 square mita na m moredaha karịa 150 mkpara ugbu a. New factory emi odude ke Jewelry Industrial Park Changping Town Dongguan City. Factorylọ ọrụ a bụ ụlọ ọrụ nke anyị.
Anyị nwere 10 pụtara ìhè R & D pesonel, injinịa na oru pesonel nwere ike ime ka ọhụrụ imewe mbadamba na e-agụ ikpe na-ọhụrụ ikpe na ahịa, ugbu a, anyị nwekwara ike ime ka ọhụrụ samples dị ka ahịa artwork oge obula izute ahịa 'dị iche iche arịrịọ .
Na 5 UV ebi akwụkwọ ngwaọrụ, anyị nwere ike na-emepụta ọ bụla mma e biri ebi foto izute Omenala chọrọ, 150 mkpara na 5 mmepụta edoghi, kwa ụbọchị mmepụta ruru 10,000 iberibe, anyị na-anabata OEM, ODM ahaziri iji na ETA 7-10-arụ ọrụ ụbọchị na ahịa ' logo. anyị na-na-na nnukwu ngwaahịa maka mgbe na-ekpo ọkụ ire ere ikpe dị ka Tri-anọghị n'ogige atụrụ mkpa na keyboard ikpe n'ihi na mbadamba na e-agụ akwụkwọ na-enweghị MOQ arịrịọ. Anyị nwere ndị ọkachamara na-achịkwa njikwa mara mma, a ga-enyocha ikpe ọ bụla tupu mbupu. ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla mma nke, anyị ga-ibido zuru furu efu.
N'ọdịnihu, anyị ga-aga n'ihu na-enwe ọganihu ma mepụta ezigbo mma na mkpuchi mkpuchi ewu ewu. Ekele dịrị ndị ahịa maka nkwado ụlọ ọrụ anyị na ndụmọdụ, kedu nke ọzọ, nkwado gị bụ ike nke ọganiihu anyị. Anyị na-atụ na anyị nwere ike ịnọgide na-enwe ezigbo imekọ ihe ọnụ ruo ogologo oge. N'ihi na nkwado nke ndị ahịa, anyị kwenyere na anyị nwere ike ime nke ọma na ụlọ ọrụ kọmputa na ọrụ maka ndị ahịa na-abawanye.
Ọ àgwà, dị ka a mbadamba ikpe na-ekpuchi N'ogbe, anyị isi ngwaahịa nwere smart mbadamba ikpe ndina ikpe na-ekpuchi na pensụl njide, mbadamba!